Bhizinesi Intelligence Mhinduro dzeiyo Retail Indasitiri - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Bhizinesi Njere, chitoro, Zvitoro zvekutengesa
Kana iwe uchida kubudirira mune iyo indasitiri yekutengesa, iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kukuru kwevatengi vako, zvavanoda, maitiro, uye marwadzo poindi. Kana iwe uchiziva zvese izvi zvakakosha zvevatengi data, iwe unozogona kuita data-inotyairwa sarudzo iyo inotungamira kune business intelligence solutions.
Paunenge uchitora a business intelligence mhinduro, unotanga zvishoma nezvishoma kuzadzisa zvinangwa zvako zvekutengesa. Bhizinesi rekuchenjera inogona kukubatsira kunatsiridza zvakawanda zvebhizinesi rako, kusanganisira bhizinesi otomatiki maitiro, ayo aunogona kuverenga zvakawanda nezvazvo mu ino.
Kana iwe uchida kudzidza zvese nezve business intelligence mhinduro dzeindasitiri yekutengesa, ramba uchiverenga.
Maitiro eBusiness Intelligence Solutions Anobatsira Sei Retail Infrastructure
Image kubudikidza Elisabeth Leunert kubva Pixabay
When we look at a typical retail IT zvivakwa, we can see two fundamental categories:
transactionional / anoshanda masystem
analytic /business intelligence hurongwa
Muchikamu chekutanga, isu tine chaiwo masisitimu akadai sekushambadzira manejimendi, POS, uye Enterprise Resource Planning. Ivo vese vanoronga huwandu hwakawanda hwekutengesa uye data rekushanda. Ivo vanogona kupa vatengesi nzwisiso kune vatengi vavo uye yavo bhizinesi nhoroondo.
Izvi zvinoreva kuti ivo vanobatsira vatengesi kuti vanzwisise zvakaitika muvhiki rapfuura, mwedzi, kana gore. Kunyangwe irwo ruzivo rwakakosha, mutengesi anoda kunzwisisa izvo zvichaitika zvakanyanya kupfuura izvo zvakatoitika.
Iko kukosha chaiko kunouya kubva kuhurongwa hunogona kupa zvinopfuura zvakajairika kushanda software. Vatengesi vanoda system inogona kugadzira kufungidzira uye data pane:
Nderudzii rwekuda chimwe chakasiyana zvigadzirwa chichava nacho
Iko kuwedzera kwemutengo shanduko kunogona kukanganisa kudiwa
Ndeapi vatengi vachapindura kune zvimwe zvinopihwa
Kuti uwane izvi, mhinduro dzeBI dzinosanganisa Data management ne predictive analytics kupa vatengesi zvinyorwa zviri nani zvezvigadzirwa zvavo, vatengi, uye vanotengesa. Zvese izvi zvinoitwa saka vatengesi vanogona kushanda zvine hungwaru - kwete zvakanyanya kuoma. Nenzira iyo, ivo vanokwanisa kuwana mibairo mikuru uye kumhanyisa bhizinesi rinobatsira.
Vatengesi vanodzidza mashandisiro eBI mhinduro vanogona kuwana kudzoka kukuru pane zvavanodyara uye voona akawanda mabhenefiti. Ngatitarisei mamwe acho.
Kuchengeta Up Nevatsva Vatengi Maitiro
Image kubudikidza Kaboopics .com kubva Pexels
If you want to have good design and chigadzirwa chinobudirira, you need to track retail consumer trends and be prepared for their changes. Customers nowadays have high expectations and retailers need to work hard to meet them.
Vatengi vanhasi vanotarisira zvinotevera kubva kuzvitoro zvavo zvekutengesa:
Mhando yakakura yezvigadzirwa zvine chekuita nemagariro izvo zvine mhando yepamusoro uye zvakaderera mutengo
Iko kugona kutaura nevashambadziri nekukurumidza uye nekugara kuburikidza nenzira dzakawanda
Keeping up with trends set by the fashion industry and evanhu vezvenhau Websites
Na business intelligence solution, you will be able to:
Ongorora hombe dhata uye tsvaga mapatani anoonekwa mune yako mutengi maitiro ekutenga
Wongorora uye uongorore zviitiko zvako zvekusimudzira kuti uone kana zvaive zvakabudirira kana kwete
Wana nzwisiso mumaitiro evatengi pakuita kwako kukwidziridzwa uye kushambadzira zvinokurudzira
Gather data from evanhu vezvenhau websites and analyze engagement levels
Paunenge uchinge uine ese eaya chaiwo-enguva nzwisiso, iwe unozogona kufanotaura zvaunofarira zvevatengi uye kupfupisa ako ekupa macircuit kuti usangane navo. Iwe zvakare uchakwanisa kufungidzira zvinodiwa zvemwaka nekururama kukuru.
Kuchengeta Tabs Pamakwikwi
Mufananidzo ne Artem Beliaikin kubva Pexels
Kupinda mubhizimusi rekutengesa kunogona kuva mukana unobatsira zvikuru, asi pane chinhu chimwe chinoodza moyo vamwe vatengesi vane tariro. Pane pamusoro pe1 miriyoni zvitoro zvekutengesa muUS moga, saka iyo indasitiri inokwikwidza zvikuru uye kana iwe uchida kubudirira mairi, unofanirwa kuchengeta mabheti kune vako vanokwikwidza.
Mhinduro yakanaka yeBI inopa isingamire-chaiyo-nguva yekutarisisa kwevako vese vanokwikwidza uye inoteedzera yavo yekunyora uye bhizinesi modhi ongororo. Paunenge uchikwanisa kuwana ruzivo urwu, unogona kuona mikana yese yekuvandudza.
Nemishumo iyi yepamberi, iwe unogona zvakare kuona kuti zvigadzirwa zvako zvinoenzana sei neizvo zvevanokwikwidza uye kuitisa ongororo yekufungidzira. Fine-tune yako mitengo uye unomhanya kutengesa kana zvichidikanwa uye gadzirisa mari yekuwedzera purofiti.
Kugadziridza Merchandising yeBusiness Intelligence Solutions
Nyaya dzekutengesa dzinogona kukanganisa zvakanyanya mashandiro e zvekutengesa mashandiro. Kunyangwe iri kubata nezvigadzirwa zviri kudiwa zvakanyanya asi kunze-kwechitoro kana kuchengetedza zvinyorwa zvisingaite mushe, zvese izvi zviitiko zvinotyisa kune vatengesi.
NaBI, unogona kuongorora zvigadzirwa zvako 'zvakapfuura kuita uye kuzvibatanidza pamwe nekufungidzira kwehunhu hwevatengi kukwidziridza kushambadzira kuitira kuti uve nekurasikirwa kushoma.
Mhando dzakasiyana dzekutengesa zvinhu dzinosanganisira:
Assortment uye saizi optimization. Nekutora vatengi kudiwa mapatani muaccount, iwe unogona kufanofungidzira ese akakodzera assortment uye saizi yezvigadzirwa iwe zvaunoda kuwana.
Mutengo wezuva nezuva, kusimudzira, uye yekumaka kuwedzeredza. Nekuverenga ese akakosha metric uye kutora vakwikwidzi muaccount, iwe unozogona kuverenga yakanakisa musika mutengo kune chimwe nechimwe chigadzirwa uye kuwedzera yako purofiti.
Space otomatiki uye optimization. Wedzera purofiti pamakumbo mana akaenzana kuchitoro chako chekutengesa uye uve nechokwadi chekuti pane nzvimbo yezvinhu zvaunotenga zvese mukuchengetedza nemumasherufu.
Yakagadziriswa kuzadzikiswa. Sarudza kuti uchagovera sei kana kutangazve zvigadzirwa zvako zvichibva pane zvaunoda. Mhinduro yeBI inogona zvakare kuongorora maitiro ekuwedzera mashandiro emanpower emabasa emawoko sekutakura nekutakura.
Kugadzira Yakanakisa Kushambadzira Strategic
Image kubudikidza Gerd Altmann kubva Pixabay
Iyo hombe nyaya vatengesi vevashambadziri vane yekushandura inotungamira kuva vatengi. Kunyangwe ivo vakaisa mari yakawanda mumashambadziro, kazhinji havaoni yakawanda ye ROI.
The avhareji kutendeuka mwero yekutungamira kwekutengesa ndeye 3% chete, saka kana ukasadzidza maitiro ekugadzira nzira yakanaka yekutengesa, haugone kubudirira.
Ne profiling uye segmenting inotungamira uye vatengi, iwe unogona gadzira macampaign ekushambadzira edhijitari izvo zvinoenderana neako vateereri vateereri. Paunogadzira zvirinani-zvinotsanangurwa zvekutsvaga mishandirapamwe, iwe unowedzera mamitero ekupindura uku uchidzikisa mari, zvese izvi zvinotungamira kune yakakwira mhinduro mwero uye kuwedzerwa mari.
Kuvhura Multiple Retail Stores
Image kubudikidza OpenClipart Vectors kubva Pixabay
Iyo yekuwedzera purofiti yaunowana inogona kukubvumidza iwe kuti utange zvimwe zvitoro uye uve nemukana wekuwana huwandu hukuru hwevatengi uchiri kushandisa yako BI mhinduro kumhanya navo ese mushe. Paunogadzirisa maitiro akakosha muzvitoro zvako zvese, unogona kutanga kushanda kuti uve mutungamiri muindastiri yako.
Iko kugona kufungidzira mafambiro uye kuona yakanakisa mitengo kuchakupa mukana wakakura pamusoro pevanokwikwidza, uye nekufamba kwenguva, iwe unozokwanisa kushandura bhizinesi rako kuita hofori yekutengesa.